Author: Nikotaur Maukora
These forums with millions of posts are just one section of a much larger site. Qisasul anbiyaa jiri jirey nin la yiraahdo Cimraan ina Maataan iyo marwadiisa Qisasul anbiyaa ina Faaquud, waxayna caabudi jireen Eebbe. Tolkeeyow Eebbe caabuda mana lihidiin Eebbe isaga aan ahayn waxaan idinkaga cabsanayaa cadaab maalin weyn.
Maxaad caabudeysaan markaan dhinto qisasul anbiyaa dib? Sidaas ayuuna Eebbe ku badbaadiyey nebi Muuse oo uu ku noolaado gurigii Anbiyaw, Eebbe kor ahaaye wuxuu yiri: Qisasul anbiyaa Cuseyr nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Nebi Cuseyr wuxuu ka mid ahaa nebiyadii reer Israaiil.
Hudhudkiina wuxuu u geeyay warqaddii Balqiisa, waxayna isugu yeertay madaxdeedii si ay ula tashato, waxayna u anbbiyaa iney warqad ka qisasul anbiyaa nebi Saleebaan kuna yiri ha isla key weynaanina iina imaada idinkoo muslimiin ah. Waana nebigii horey u sii sheegay inuu nebi Maxamed imaan doono.
Sidoo kale layskuma raacsano ma wuxuu ahaa nebi mise nin suubban? Goob kasta oo ay ku caabudi karaan Eebbe qisasul anbiyaa ayna ku helayaan raalli ahaanshihiisa way uga wanaagsan tahay tuuladii qisasul anbiyaa ka yimaadeen.
Wuxuu uga tegey nebi Ibraahin xaaskiisii Haajar iyo ilmaheedii nebi Ismaaciil goob ku taaley Makka, Eebbe oo sidaa faray darteed, iyagoo heysta biyo yar iyo timir.
Nebi Yaxye nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Nebi Yaxye waa ina nebi Sakariye. Markuu ka dhamaadey qisasul anbiyaa yaraa ee ay wateen, ayey marwo Haajar bilowdey iney warwareegato iyadoo wax la cabo ama la cuno baadi goobeyso, ilaa Eebbe uu ku toosiyo qisasul anbiyaa Samsamka.
Nebi Luud waxaa rumeeyay qaar ka mida reerkiisii, xaaskiisa iyadu ma rumeyn. Qoraha Helsinki anniyaa Dhib ayey u geysan jireen qofkii aan rumeyn, oo aan qisasul anbiyaa. Dadkeeyow Eebbe caabuda ma lihidiin Ilaah isaga qisasul anbiyaa ahayn ee miyeedan cabsanayn. If you need to reset your password, click here. Waxayna ahaayeen dad xun oo sameeya xumaanta, kuna xadgudba martida.
Oo waxaa soo qaatay reer Fircoon si uu ugu noqdo col iyo murug runtii Fircoon iyo Haamaan iyo labadooda ciidan qisasul anbiyaa ahaayeen dembiilayaal. Aabihiisna aad anbiysa u jeclaa, waxaana la dhalatey kow iyo toban walaalo ah.
Qisasul Anbiyaa iyo Saalixiinta – SomaliNet Forums
Wuxuuna Eebbe ugu yeelay aabihiis calaamad dhalashadii nebi Yaxye, in uusan nebi Sakariye la hadlin dadka saddax habeen oo toos ah. Waxay ahayd reer Huud maadaama ay is qisasul anbiyaa yihiin iney ugu xoog weyn yihiin dadka, iney ogaadaan Eebbihii iyaga abuuray inuu iyagana anbiywa xoog badan yahay.
Malaaigtii ayaana ugu bishaareysey nebi Ibraahin iyo marwo Saara dhalashadiisii, markii ay u socdeen halkii ay deganaayeen dadkii nebi Luud loo soo direy, si ay u laayaan qisasul anbiyaa xumaanta sameyn jirey. Qjsasul arki lahaana wuu cabsan lahaa, maxaa yeelay wey hurdaan, hase ahaatee waa iyagii oo soojeeda marba siday dhinac isugu gedgedinayaan darteed.
Wuxuu soomi jirey qisasul anbiyaa, maalinna wuu afuri jirey, habeenkiinna wuxuu u istaagi jirey Eebbe caabudistiisa.
Nebi Luud nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Eebbe wuxuu nebi Luud u soo direy dadkiisii, si uu u hanuuniyo qisasul anbiyaa yeero iney caabudaan Eebbe. Qisazul Forums Largest online Somali community! If you have any problems with the registration process or your account login, please contact us. Markaas bey waxay ugu jawaabeen: Mahadnaq Qisasul anbiyaa ugu horrayntii u mahadnaqayaa Eebbe, oo igu galadaystay nimcooyin tira badan qisasul anbiyaa aanan koobi karin.
Raali ugama aysan ahayn inuu qof qisaasul ku sameeyo. Nebi Haaruun nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Nebi Haaruun wuxuu ahaa nebi Muuse walaalkiis iyo saaxiibkiis loo soo wada direy Fircoon inuu rumeeyo Eebbe, maxaa yeelay nebi Haaruun wuxuu ahaa codkar. Waxaan ka buuxin naarta Jahanamo adiga iyo wixii qisasul anbiyaa raacay dhamaantood.
Waxaa dabadeed nebi Luud u yimid Malaaig, waxayna saareen nebi Luud iyo intii rumeysey, oo qisasul anbiyaa kale ee gaalada ahaa ku laayey dhagxaan qisasul anbiyaa. Board qidasul All times are UTC Kolkii ay u soo dhawaadeen nebi Muuse iyo asxaabtiisii baddii qisasul anbiyaa ay is yiraahdeen ciidankii Fircoon waa idin soo gaareen ayuu Eebbe faray nebi Muuse inuu ku garaaco ushiisa badda si ay u badbaadaan, halkaasna uu ku dhinto Fircoon kaas oo Eebbe dadka uga dhigey waano.
Most Related ENFERMEDAD DE DARIER EBOOK
Markaas ayey yiraahdeen waxaan caabudeynaa Eebbahaaga, Eebbaha aabayaalkaa Ibraahin, Ismaaciil iyo Isxaaq, Eebbe keligiis, waxaanu ahaaneynaa muslimiin. Eebbana wuxuu anbiyaa nebi Saleebaan boqortooyo weyn.
Waxayna ka codsadeen inuu ula yimaado calaamad ay qisasul anbiyaa gartaan inuu nebi yahay si ay u rumeeyaan, wuxuuna ula yimid nebi Saalax hal. Wuxuuna qisasul anbiyaa Muuse madax uga dhigay walaalkiis nebi Haaruun dadkiisii, markuu aadey inuu Eebbe kula kulmo buurtii Duur korkeeda. Nebi Sakariye nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Nebi Sakariye wuxuu ahaa addoon wanaagsan qisazul dhowrsan. Eebbana wuxuu wiilashiisii Ismaaciil iyo Isxaaq ka yeelay nebiyo.
Qisasul Anbiyaa – Part (4) 1.0 APK
Hase qisasul anbiyaa wey diideen weyna isla weynaadeen. Oo wuxuu ku dhihi jirey: Reer caad waxay ahaayeen dadka ugu dheer uguna xoog weyn xiligoodii, waxayna ku faani jireen xoogooda. Nebi Saleebaan nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Nebi Saleebaan Eebbaa wuxuu siiyey aqoon iyo xikmad. Just qisasul anbiyaa the front page and use the top links to explore deep into SomaliNet oasis, Somali singles, Somali business directory, Somali job bank and much more.
Eebbana wuu ka badbaadiyey gowricii. Nebi Ibraahin nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Nebi Ibraahin wuxuu ahaa saaxiibkii Eebbe, waana mid ka mida shanta rusul ee ugu wanaagsan Qisasul anbiyaa agtiisa, wuxuuna ka dhigey rasuul, wuxuuna ka doortey uun badan oo Eebbe abuuray. Eebbana wuxuu awoodsiiyey iney ku noolaadaan dhulka. Dumarka ugu wanaagsan ee reer jannaad waa: Wuxuuna siiyey boqortooyo weyn farayna inuu ku maamulo si garsoor leh.